विदाइ हुँदै कुलमानले भने- मेरो प्रेरणाको स्रोत नेपाली जनता
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट चार वर्षे कार्यकाल सकेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कर्मचारीले बिदाइ गरेका छन्। मंगलबार प्राधिकरणमा आयोजित बिदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले नेतृत्वमा कोही आउनु/जानु सामान्य प्रक्रिया भएको बताएका छन् । ‘नेतृत्व आउनेजाने भइरहन्छ। हाम्रो अहिलेको जुन उर्जा छ । यो उर्जा जुनसुकै नेतृत्व आए पनि रहिरहोस् ।’ उनले भने ।
घिसिङले आफूले सुरुबाटै प्राधिकरणको हितको पक्षमा अडान लिँदै आएको बताए। ‘कुलमानले कसैले भनेकै मान्दैन, आफैं खुसी गर्छ भन्‍ने आरोप पनि लाग्यो। हो, मैले प्राधिकरणको हितका लागि केही कुरामा अडान लिएकै हुँ । ट्रेड युनियनका साथीहरुले राम्रा कुरा गर्दा मानेकै छु’ उनले भने । घिसिङले आफूलाई साथ दिने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवादसमेत दिएका छन्। प्राधिकरणमा रहेका बेला आफूले कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरेको बताउँदै सरकारको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली अभियान’ मा आफू सारथी बन्न पाएकोमा खुशी लागेको बताए ।
२०७३ सालको भदौ २९ गते नियुक्त भएका घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो । कार्यकालमा निकै प्रशंसा कमाएका घिसिङलाई अर्को कार्यकाल पनि प्राधिकरणको नेतृत्व दिन सरकारमाथि जनदबाब बढेको छ । तर सरकारले पुनर्नियुक्ति विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ घिसिङलाई नै लैजानुपर्ने पक्षमा भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने दोहोर्‍याउने मनस्थितिमा नभएको स्रोतको भनाई छ ।
बिदाई कार्यक्रममा घिसिङले राखेको मन्तव्य :
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो । प्राधिकरणको आव २०७२/७३ सम्ममा सञ्चित घाटा रु.३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानी थियो । एकातर्फ कहालिलाग्दो अँध्यारोले मुलुक अक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो । प्रणालीमा वार्षिक विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो, करिब ६३ प्रतिशत जनता मात्रै ग्रीडको विद्युत पहुँचमा थिए । सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङको अत्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो ।
वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली संचालनमार्फत परीक्षणको रुपमा मुलकभरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयौं । २०७३ को लक्ष्मीपूजाको दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो । लक्ष्मी पूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो । त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भयौं । अन्ततः मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौं । वैशाख २०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकबाट लोडसेडिङलाई इतिहासमा बिलय गराइदिएका छौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कर्मचारी र आमउपभोक्ताको साथ र सहयोगमा नै सम्झदै कहालीलाग्ने त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै उज्यालो युग सुरुवात गर्न सफल भएका छौं ।
मैले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण १ अर्ब ४७ करोड खुद नाफा कमाउन सफल भयो, त्यसपछिका वर्षहरूमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो । दोश्रो वर्ष २ अर्ब ८५ करोड, तेश्रो वर्ष ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमायो, चौथो वषमा नाफा बढेर ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुनै वेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये दुई वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरबपूर्ण इतिहास बनाउन सफल भएको छ । चालु आवको वजेटमा प्राधिकरणको नाफा रु. ११ अर्बभन्दा बढी रहने प्रक्षेपन गरिएको छ ।
ऋणात्मक रहेको सञ्चित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ । चार वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेकोमा आव ०७६/७७मा प्राधिकरणले सम्पूर्ण सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा लैजान सफल भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलोपटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको छ । १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क र न्युनतम शुल्क रु. ३० मात्र तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महशुल करिa ८-९ प्रतिशतले घटाइएको छ भने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरूलाई लाग्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महंगो महशुल हटाइएको छ । सामुदायिक खानेपानी, सिंचाई तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटेको छ । यस्ले गर्दा विद्युत माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनमा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको खिम्ती–१ र स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत सस्तोमा आउने हुँदा ग्राहकको विद्युत महशुल अझ सस्तो गर्न सकिनेछ ।
एकातर्फ लोडसेडिङ इतिहासमा बिलय भई नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर उत्साहजनक छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुधार मात्र होइन, उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गरिएको छ ।
नेपालको उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने दूधकोशी (६३५ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट) र तामाकोशी ५ (९९ मेगावाट) जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने चरणमा छन् । यी आयोजनाहरूको लगानी जुटाएर जाँडै निर्माण सुरु गर्ने चरणमा पुग्नेछन् ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिबृद्धि भै करिव १५०० मेगावाट पुगेको छ । नेपाल–भारत दोश्रो अन्तदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा तयार भएको छ । साथै नेपाल चीनबीचको रातोमाटे रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदरीपत्रमा हस्ताक्षर भै कार्य अगाडि बढेको छ । नेपालले भारत तथा बंगलादेशको विद्युत् बजारमा पहँुच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
चारवर्षे कार्यकालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्वपूर्ण योजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट पुरा हुन सकेनन्ः जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशीसहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनीअन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर वनाउदै निर्यात गर्ने, काठमाडौ उपत्यकालाई तार र पोल रहित वनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रीड स्वचालित प्रणाली देशभरी लागू गर्ने, देशभरका शतप्रतिशत जनतालाई विद्युत्‌मा पहुँच पुर्याउने, डिजिटल एनईए बनाउने आदि मुख्य रहेका छन् ।
मलाई विश्वास गरी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने मौका दिनु हुने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालगायत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । उहाँहरूको नेतृत्व छोटो रहेता पनि सर्वसाधारणले अनुभूत हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न एवं समग्र विद्युत क्षेत्रको सुधारको जग बसाल्न सफल भएको थियो ।
मेरो चार वर्षे कार्यकालको सवभन्दा बढी समय (करिव साढे दुई वर्ष) वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा व्यतित भयो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानको सारथी वन्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ ।
सञ्चालक समितिबाट गरिने हरेक निर्णयहरूमा सकारात्मक सोचका साथ प्रभावकारी भूमिका निभाई व्यवस्थापनको हरेक कदममा सहयोग पुर्याउनु हुने वर्तमान र पूर्व सञ्चालकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्राधिकरणलाई सामूहिक नेतृत्व दिन अहोरात्र खटिएका उच्चपदस्थ मेरा सहकर्मी साथीहरूमा उच्च तहको व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सफल हुनु भएकोमा हार्दिक वधाई एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु । जुनसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गरी व्यस्थापनको हरेक क्रियाकलापमा सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मेरो कार्यकालमा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक र महत्वपूर्ण रह्यो । यसका लागि आधिकारिक तथा क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । राति, विहान र बिदाको समय नभनी हरपल मेरो हरेक पाईलामा निरन्तर सहयोग गर्नु हुने मेरा सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्राधिकरणमार्फत नेपालको उर्जा क्षेत्रमा वित्तिय सहयोग गर्नु हुने विकास साझेदार निकायहरू तथा संचयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायत स्वदेशी वित्तिय संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्राधिकरणमार्फत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाहरूको लागि आवश्यक वजेट व्यवस्थापन गरी सहयोग गर्नु हुने अर्थ मन्त्रालय, चुहावट नियन्त्रण, जग्गा अधिकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था संवन्धी कार्यमा सहयोग गर्नु हुने गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्नु हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण र आयोजनाहरूको छनौट एवं अनुगमनमा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरो प्रेरणाको स्रोत हुन् । आगामी दिनमा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरू नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनेछन् ।
नेपाल सरकारले खरिद गरेको धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालन हुने रेल सेट जनकपुरधाम आइपुगेको छ